DKMG oo hub ay lahaayeen Shabaab loo soo gacan galiyay | raascasayrmedia.com
← Ciidamad amaanka Gobolka Raascasayr oo xabsiga dhigay Wafti ka socday Puntland
Manchester City oo FA-Cup-ka ka reebtay kooxda Man. United →
April 17, 2011 · 12:23 am
DKMG oo hub ay lahaayeen Shabaab loo soo gacan galiyay
Wasaarada Gaashaandhiga dowladda KMG Soomaaliya ayaa maanta lacag ugu bedashay hub iyo gaadiid ay la soo goosteen dhalinyaro dhawaan isku soo dhiibay dowladda KMG oo ka soo goostay xarakada Al Shabaab.
Wasiir ku xigeenka wasaarada gaashaandhiga xukuumada KMG Soomaaliya C/rashiid Max’ed Xidig oo Caawa u waramayay Shabakadda Warbaahinta Shabelle ayaa waxa uu sheegay in dhalinyaro ka tirsan Xarakada Al Shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda KMG islamarkaana hubkii iyo gaadiidkii dagaal ee ay wateen dowladda KMG ay ugu badashay lacag badan.
C/rashiid Max’ed Xidig ayaa sheegay in arintaani ay dhiiri galin u noqoneyso dhalinyarada kale ee ka tirsan Al Shabaab islamarkaana ay ku qasbeyso in ay hubka kala soo goostaan xarakada Al Shabaab oo dowladda ka iibsadaan.
Waxa uu carabka ku dhuftay in 48 saacadood ee ugu dambeeyay dowladda KMG ay isku soo dhiibeen in ka badan 100 dagaalyahan oo ka tirsanaa xarakada Al Shabaab isagoo tilmaamay in aysan wax dhibaato ah u geysan ayna soo dhaweynayaan kuwa kale ee haatan ka soo baxaya.
Waa markii ugu horeysay oo dowladda KMG Soomaaliya ay u lacageyso hubkooda iyo gaadiid ay kala soo goosteen xarakada Al Shabaab, iyadoo dhinaca kale aysan jirin wax war ah oo ka soo baxaya Xarakada al Shabaab.